'Ready Player One' ရဲ့ Poster အသစ်မှာ 'အဝင်း' ကိုရှာကြမယ် - MoviesFan
‘Ready Player One’ ရဲ့ Poster အသစ်မှာ ‘အဝင်း’ ကိုရှာကြမယ်
မြန်မာပရိသတ်တွေ “အဝင်း အဝင်း” နဲ့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား ဂျပန်အဆိုတော်/သရုပ်ဆောင် မိုရီဆာကီဝင်း (Morisaki Win) တစ်ယောက် ဒါရိုက်တာကြီး Steven Spielberg ရဲ့ရုပ်ရှင် Ready Player One မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ သိသူတွေရှိသလို မသိသူတွေလည်းရှိကြမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ဖွားတစ်ယောက်ကို ဟောလိဝုဒ် Blockbuster ရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာမြင်တွေ့ရတာ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဝင်းက ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတယ်သာပြောတာ ခုချိန်ထိမမြင်ရသေးလို့ မချင့်မရဲဖြစ်နေပါသလား.. စိတ်မပူပါနဲ့.. တစ်နေ့ကထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ poster အသစ်မှာ အဝင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ poster မှာ အဝင်း ပါပါတယ်။ ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ အဖြေမှန်ကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ခိုးမကြည့်ကြေးနော်.. ကိုယ်ထင်တာအရင်မှန်းပြီးမှ သွားကြည့်ပါ။ ?
ကဲ.. စဉ်းစားပြီးသွားပြီလား.. အဲဒါဆိုရင်တော့ အဖြေမှန်လေးကို ပြောပြီနော်…
အဝင်းသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကောင် Daito ကို Poster ရဲ့အောက်ဆုံးမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကားဘေးနားမှာ လူငါးယောက်တန်းစီရပ်နေတဲ့အထဲက အနီရောင် ဆာမူရိုင်းဝတ်စုံနဲ့က အားလုံးရဲ့အသည်းလေး အဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Daito ဆိုတာက The High Five အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Ready Player One ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးပြောရင် spoil သလိုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ အဝင်းရဲ့ Daito ကို ရုပ်ရှင်ပြမယ့် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ကျရင် ပိတ်ကားထက်မှာ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါလို့… ?
Previous Post: Jaden Smith ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Skate Kitchen
Next Post: Woody Allen ရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်ရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Midnight In Paris